Posted by Tranquillus | Oct 12, 2018 | Xafiiska
Maalin kasta waxaan la kulannaa cusub codsiyada muhiimka ah ilaa nolol maalmeedkeena, taas oo noqon doona mid ka baxsan dhowr sano ka dib, iyo in, sidoo kale in si gaar ah as a field of professional.
Hadday tahay barnaamij softiweer ah, codsi ama degel fudud, ku dhowaad dhammaan adeegyadani waxay u baahan yihiin iyada oo aan laga reebin inay tahay inay koonto abuuraan mararka qaarkoodna waa dhibaato dhab ah in la tirtiro koontadan marka aadan mar dambe uma baahnin!
Waqtiga intiisa badan, barnaamijyadu waxay ka ciyaaraan dhibaatada tirtiridda xisaabta si ay u ilaaliso macluumaadkaaga shakhsiyeed si ay si joogto ah kuugu soo noqoto si aad dib ugu noqoto in ay adeegsato adeegyadeeda ama mararka qaar xitaa u iibiso shirkadaha saddexaad.
Run ahaantii, adigoon ogeyn nidaamka saxda ah, mararka qaar jahwareerka si aad u tirtirto koontadaada, dadka isticmaala intooda badan waxay door bidaan in ay iska daayaan oo ay ka tagaan macluumaadkooda shirkadaha kuwaas oo sii wata iyaga oo dhibaya, si ay ugu dhammeeyaan spam kiiska ugu fiican.
Taasi waa sababta xal loo helo inay si fudud kuu siiso, iyada oo aan loo baahnayn in la abuuro koonto, dhammaan macluumaadka faahfaahsan (Ingiriisi) adeeg kasta si loo ogaado habka loo xirayo xisaab.
Codsigan, ama halkii, degelkan waxaa lagu magacaabaa AccountKiller!
Sidee ayuu u shaqeeyaa AccountKiller?
AccountKiller.com waa meel kaliya oo ku qoran liiska ugu badnaan ee adeegyada qaabab kala duwan, kuwaas oo si gaar ah u adagtahay in la tirtiro, ama ma aha mid munaasib ah marka ay timaado xisaab xirka.
Sidaas awgeed waxaa jira adeegyo kala duwan oo kala duwan, sida Facebook, Skype ama Tinder. Haddii aad waligaa isku dayday inaad xirto mid ka mid ah koontooyinkooda, waad fahantay qiimaha ay leedahay hage la heli karo. Waxaa laga yaabaa inaadan guuleysan oo aad ku dhammaato inaad quusato. Hadday sidaas tahay, ma aha goor dambe, AccountKiller weli waad ku heli kartaa aargudashadaada!
READ Kala fogow la shaqee TeamViewer inta lagu jiro shaqo joojinta
AccountKiller waxay qeexaysaa goobaha iyo codsiyada kala duwan sida ay ugu adag tahay inay xirtaan koontada. Waxaa jira midabyo 3 (Caddaan, Garaac, Madow), caddaanku wuxuu ahaa midka ugu fudud iyo madowga ugu dhib badan.
In ka badan hage, digniin dheeraad ah?
AccountKiller kuma istaagno hage fudud. Xaqiiqdii, degelku wuxuu ku siiyaa fidin u gaar ah, oo laga heli karo daalacashada badankood iyo sidoo kale IOS. Kordhintan waxaa laga heli karaa magaca: AccountKiller SiteCheck.
Danta aad u leedahay codsigaan ma aha inaad tirtirto koontooyinka aad adigu leedahay, laakiin halkii aad u adeegi laheyd sida daawashada heerka shuruudaha lagu tirtirayo koontada adeeg gaar ah.
Codsigan, haddii aad rabto inaad iska diiwaangeliso meel iyo in goobta lagu soo gudbiyo database-ka AccountKiller (kaas oo sidoo kale la cusbooneysiin karo dadka isticmaala kuwaas oo haysta fursad si toos ah loogu gudbin karo goobta www.accountkiller.com ), kordhintu waxay kaaga digeysaa adiga oo ku siinaya dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka u ah si dhaqso leh oo waxtar leh u tirtirto koontadaada maalinta aad rabto!
Discover AccountKiller, hagaha isticmaalaha guud oo kaa caawiya inaad ka takhalusto xisaab celinta dib-u-dejinta. Agoosto 25th, 2020Tranquillus
horeWaxqabadka Google, ama sida loo ogaado wax walba oo ku saabsan hawlahaaga ku lug leh Google iyo adeegyada kala duwan.
socdaSida loo nadiifiyo shabakadahaaga bulshada daqiiqado leh Mypermissions?
Sidee loo Nadiifiyaa Macluumaadkaaga Twitter-ka iyo ilaalinta Sawirkaaga?
Xirfadaha muhiimka ah ee lagu hormarinayo otomaatiga xafiiska
Xaraashka tayo sare leh ee Excel, wax barashada lagu barto oo aan lahayn halista qaladaadka.